I-Square Enix isebenza kwi-RPG ekhethekileyo ye-Apple Watch | IPhone iindaba
Isikwere i-Enix isebenza kwi-RPG ekhethekileyo ye-Apple Watch
UPablo Aparicio | | Apple Watch, iWatchO
Kungekudala emva kokumiliselwa kwePokémon GO, ndifunde ingxelo yezimvo ndisithi usetyenziso lweApple Watch luya kuba yindawo ebaluleke kakhulu yokuthengisa iwotshi. Ngokwam, ndicinga ngokufanayo, kwaye ndicinga ukuba iyakuba njalo ngeGlasi kaGoogle, iiglasi ezikrelekrele zenjini enkulu yokukhangela engakhange ibe nempumelelo ebebeyilindele kubo. Square Enix Uyakholelwa ukuba kuya kufuneka ubheje kwizihloko ezikhethekileyo zolu hlobo lwesixhobo.
Square Enix uye wazisa Amakhonkco eCosmos, umdlalo wokudlala indima (RPG) oya kufumaneka kuphela kwi-watchOS, oko kukuthi, kwi-Apple smart watch. Imisesane yeCosmos iya kusebenzisa ixesha elisebenzisa iApple Watch ngokuhambisa isithsaba sedijithali. Umdlalo uya kuthumela abanini beapile babukele imiyalezo emininzi ngokuxhomekeke kumanqanaba amanyathelo esiwathatha ngosuku kwaye, ngokutsho komphuhlisi, oku kunokwenzeka kuphela kwiApple Watch.
I-Square Enix iya kubheja kwi-Apple Watch
Kulindeleke ukuba Imizobo ilungile, Kodwa ikwakhangeleka ngathi iphikseliweyo ukuze ibe nomfanekiso othe kratya kwaye siziva sinqwenela okuthile. Umvelisi womdlalo nguTakehiro Ando, ​​owayesebenza kwiRings Enix's Chaos Rings, kwaye nakwisihloko ikwayinto ephambili uYusuke Naora, owalathisa izihloko ezinje ngeFinal Fantasy VII, VIII, X kunye neXV.
Ibali yenzeka kwihlabathi "leXesha lokuphumla", apho iimvakalelo zoluntu zigqwethekile ngandlel 'ithile. Ixesha ebelimile lishukume kwakhona, kwaye ukuze sikwazi ukubuyisa "uthixokazi wexesha", kuyakufuneka sijongane neemvakalelo zabantu zeXesha lokuphumla.
Amakhonkco eCosmos iza kungena ixesha elithile ehlotyeni, ke kufanelekile ukuba ibukele iVenkile yeVenkile yeVenkile ngaphakathi kweenyanga ezimbini. Azisekho iinkcukacha ezaziwayo, kodwa singasondela kumzuzu xa iApple Watch isebenza ukudlala izihloko ezisemgangathweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Isikwere i-Enix isebenza kwi-RPG ekhethekileyo ye-Apple Watch
IOS 10 iyakusilumkisa xa isinxibelelanisi sombane simanzi ukunqanda iingozi